NAHOANA? - www.yomelijah.com
Main Menu (amin'ny teny anglisy)
Kiswahili Afrikaans አማርኛ Hausa Igbo Soomaali isiXhosa Yoruba Zulu
Tsindrio ny rohy raha hijery ny fampisehoana an-dahatsary ny lahatsoratra ao amin'ny twitter, raha manana kaonty ianao
Fa maninona Andriamanitra no mamela ny fijaliana sy ny faharatsiana mandraka androany?
"Jehovah ô, mandra-pahoviana no iantsoako vonjy, nefa tsy henoinao? Mandra-pahoviana no iantsoako vonjy aminao noho ny herisetra, nefa tsy vonjenao? Nahoana no ataonao mahita zava-dratsy aho, ary jerenao fotsiny ny faharatsiana? Nahoana no misy fandrobana sy herisetra eo anoloako, ary nahoana no misy fifamaliana sy fifandirana?Koa ngoly ny lalàna, ary tsy tafavoaka ny rariny. Voahodidin’ny ratsy fanahy ny olo-marina, ka voaolana ny rariny"
"Ary nandinika indray aho mba hahitako ny fampahoriana rehetra atao etỳ ambanin’ny masoandro, ka hitako ny ranomason’ny ampahorina, nefa izy tsy nisy nampionona. Teo am-pelatanan’izay nampahory azy mantsy ny fahefana, ka tsy mba nisy nampionona izy. (...) Efa hitako daholo ny zava-drehetra, nandritra ny fiainana poakaty nananako. Misy olo-marina maty nefa nanao ny tsara, ary misy ratsy fanahy ela velona nefa manao ratsy. (...) Efa hitako daholo izany rehetra izany, ary niezaka tamin’ny foko manontolo aho mba handinika ny asa rehetra atao etỳ ambanin’ny masoandro. Nandritra izany fotoana izany, dia nanjakazaka tamin’ny namany ny olona ka nampiditra loza taminy. (...) Izao koa ny zava-poana mitranga eto ambonin’ny tany: Misy olo-marina iharan’ny valin’asan’ny ratsy fanahy, ary misy ratsy fanahy mioty ny vokatry ny asan’ny olo-marina. Hoy aho: “Zava-poana koa izany". (...) Ny mpanompo indray no hitako mitaingin-tsoavaly, fa ny andriana kosa mandeha an-tongotra toy ny mpanompo"
(Mpitoriteny 4:1; 7:15; 8:9,14; 10:7)
"Fa navela ho tonga zava-poana ny zavaboary, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho ny sitrapon’ilay namela izany hitranga. Eny, navela hitranga izany, miorina amin’izao fanantenana izao"
"Rehefa misy fitsapana, dia aoka izy tsy hilaza hoe: “Fitsapana avy amin’Andriamanitra izao.” Sady tsy azo tsapaina amin-javatra ratsy mantsy Andriamanitra, no tsy mitsapa na iza na iza amin’izany koa"
Ny tena meloka amin'ity toe-javatra ity dia i Satana devoly, resahina ao amin'ny Baiboly ho mpiampanga (Apokalypsy 12: 9). Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, dia nilaza fa ny devoly dia mpandainga ary mpamono olona (Jaona 8:44). Misy fiampangana roa lehibe:
1 - Ny fanontaniana momba ny fiandrianan'Andriamanitra.
2 - Ny resaka tsy fivadihan'olombelona.
Rehefa misy fiampangana goavana dia maharitra ela ny fitsarana farany. Ny faminaniana ao amin'ny Daniela toko faha-7, dia mampiseho ny zava-misy ao amin'ny tribonaly, izay idiran'ny fiandrianan'Andriamanitra, izay misy didim-pitsarana: "Renirano afo no nikoriana sy nivoaka avy teo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy, ary iray alina ampitomboina iray alina no nijoro teo anatrehany. Nanomboka ny Fitsarana, ka nisy boky nosokafana. (...) Ary nanomboka ny Fitsarana, ka nesorina tamin’io mpanjaka io ny fanjakany, mba hanafoanana sy handringanana azy tanteraka" (Daniela 7:10,26). Araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly, ny fanapahana ny tany dia nesorina tamin'i satana sy ny olona. Ity sarin'ny tribonaly ity dia aseho ao amin'ny Isaia toko faha-43, izay voasoratra fa izay mankatoa an'Andriamanitra, dia "vavolombatambiny": “Ianareo no vavolombeloko”, hoy i Jehovah, “eny, mpanompoko izay nofidiko, mba hahafantaranareo sy hinoanareo ahy, ary hahatakaranareo fa tsy miova Aho. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona, ary mbola tsy nisy koa taoriako. Izaho no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho” (Isaia 43:10,11). Jesosy Kristy dia antsoina koa hoe "vavolombelona mahatoky" avy amin'Andriamanitra (Apôkalypsy 1:5).
Mifandraika amin'ireto fiampangana roa lehibe ireto, dia navelan'i Jehovah Andriamanitra hanome fotoana i Satana sy ny olombelona, ​​mihoatra ny 6000 taona, haneho ny porofo manamarin'izy ireo, izany hoe raha afaka mitondra ny tany izy ireo raha tsy misy ny fiandrianan'Andriamanitra. Eo am-pamaranana ity zavatra niainana ity isika izay aharihary ny laingan'ny devoly amin'ny toe-javatra mahatsiravina izay ahatongavan'ny zanak'olombelona, ​​eo an-tsisin'ny faharavana tanteraka (Matio 24:22). Ny fitsarana sy ny fandringanana dia hitranga amin'ny fahoriana lehibe (Matio 24:21; 25:31-46). Andao horesahintsika manokana kokoa ireo fiampangana roa an'ny devoly, ao amin'ny Genesisy toko 2 sy 3, ary ny bokin'i Joba toko 1 sy 2.
1 - Ny fanontaniana momba ny fiandrianan'Andriamanitra
Ny Genesisy toko 2 dia mampahafantatra antsika fa Andriamanitra dia namorona ny olona ka nametraka azy tao amin'ny "zaridaina" Edena. Lavorary i Adama ary nanana fahalalahana lehibe (Jaona 8:32). Na izany aza, Andriamanitra dia nametra fetra an'io fahalalahana io: hazo: "Dia naka an-dralehilahy i Jehovah Andriamanitra, ka nametraka azy tao amin’ny zaridainan’i Edena mba hiasa sy hikarakara an’ilay zaridaina. Ary i Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy hoe: “Afaka mihinana izay laninao amin’ny voan’ny hazo rehetra eo amin’ny zaridaina ianao. Aza ihinananao anefa ny voan’ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin’ny andro ihinananao azy, dia ho faty tokoa ianao”” (Genesisy 2:15-17). Ankehitriny ity hazo tena izy ity, ny fetra mivaingana, "fahalalana (mivaingana) ny tsara sy ny ratsy". Ary Andriamanitra dia nametra fetra teo anelanelan'ny "tsara" sy ny fankatoavana azy sy "ratsy" ary ny tsy fankatoavana.
Miharihary fa tsy sarotra ity didin'Andriamanitra ity (ampitahao amin'ny Matio 11:28-30 "Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako" ary ny 1 Jaona 5:3 "Tsy mavesatra ny didiny" (ny avy amin'Andriamanitra)). Raha ny fanazavana, misy ny nilaza fa ny "voankazo voarara" dia midika firaisana ara-nofo: tsy mety izany, satria rehefa nanome an'io baiko io Andriamanitra dia tsy nisy Eva. Andriamanitra dia tsy nandrara ny zavatra tsy hain'i Adama (Ampitahao ny fanisan-taona ny zava-nitranga Genesisy 2:15-17 (ny didin'Andriamanitra) amin'ny 2:18-25 (ny famoronana an'i Eva)).
Ny fakam-panahin'ny devoly
"Ary ny menarana no malina indrindra tamin’ny bibidia rehetra nataon’i Jehovah Andriamanitra. Koa hoy izy io tamin-dravehivavy: “Marina tokoa ve fa niteny taminareo Andriamanitra hoe tsy tokony hihinananareo ny voan’ny hazo rehetra ato amin’ny zaridaina?” Dia hoy ravehivavy tamin’ilay menarana: “Mahazo mihinana ny voan’ireo hazo ato amin’ny zaridaina izahay. Fa hoy kosa Andriamanitra taminay momba ny voan’ilay hazo eo afovoan’ny zaridaina: ‘Aza ihinananareo io, ary aza kasihinareo mba tsy ho faty ianareo.’” Dia hoy ny menarana tamin-dravehivavy: “Tsy ho faty velively ianareo. Fa fantatr’Andriamanitra fa amin’ny andro hihinananareo azy io, dia hahiratra ny masonareo, ary ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy.” Koa hitan-dravehivavy fa mahate hihinana ilay hazo sady mahafinaritra ny maso, eny, mahafinaritra ny mijery azy. Koa nakany ny voany ka nohaniny. Avy eo dia nomeny koa ny vadiny rehefa tafaraka taminy, ary dia nihinana izy" (Genesisy 3:1-6).
Fa maninona i Satana no niresaka tamin'i Eva fa tsy Adama? Voasoratra hoe: "Ary tsy i Adama koa no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka tanteraka, ka nanjary nandika lalàna" (1 Timoty 2:14). Fa maninona no Eva no voafitaka? Noho ny fahatanorany, raha mbola i Adama dia efa-polo farafaharatsiny. Noho izany dia nanararaotra ny tsy za-draharaha Eva i Satana. Na izany aza, fantatr'i Adama izay nataony, dia nanapa-kevitra ny hanota izy tamin'ny fomba fanahy iniana. Ity fiampangana voalohany an'ny devoly ity dia fanafihana ny fiandrianan'Andriamanitra (Apokalypsy 4:11).
Fitsarana sy fampanantenan'Andriamanitra
Fotoana fohy talohan'ny faran'io andro io, talohan'ny filentehan'ny masoandro, dia namoaka ny didim-pitsarany Andriamanitra (Genesisy 3:8-19). Nametraka fanontaniana i Jehovah Andriamanitra talohan'ny fitsarana. Ity ny valiny: "Ary hoy ralehilahy: “Ilay vehivavy nomenao ahy no nanome ahy ny voan’ilay hazo, ka nihinana aho.” Dia hoy i Jehovah Andriamanitra tamin-dravehivavy: “Ahoana izany nataonao izany?” Hoy ny navalin-dravehivavy: “Ny menarana no namitaka ahy, ka nihinana aho”" (Genesisy 3:12,13). Tsy niaiky ny helony i Adama sy i Eva fa nanandrana nanamarina ny tenany. Ao amin'ny Genesisy 3:14-19 isika dia afaka mamaky ny didim-pitsaran'Andriamanitra miaraka amin'ny fampanantenany ny fahatanterahan'ny fikasany: "Ary hataoko mifandrafy ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany. Hanorotoro ny lohanao izy io, ary ianao kosa handratra azy eo amin’ny voditongony" (Genesisy 3:15). Tamin'ity fampanantenany ity dia nilaza i Jehovah Andriamanitra fa ho tanteraka ny fikasany, ary haringana i satana devoly. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia niditra teto amin'izao tontolo izao ny ota, ary koa ny vokany lehibe indrindra, dia ny fahafatesana: "Koa tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra" (Romanina 5:12).
2 - Ny resaka tsy fivadihan'olombelona
Nilaza ny devoly fa misy lesoka eo amin'ny natioran'olombelona. Izao no fiampangan'ny devoly amin'ny tsy fivadihan'i Joba: "Dia hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Avy aiza ianao?” Dia namaly an’i Jehovah i Satana hoe: “Avy nivezivezy teny ambonin’ny tany sy nandehandeha teny aho.” Ary hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Efa nandinika an’i Joba mpanompoko ve ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin’ny tany? Lehilahy tsy manan-tsiny izy, sady marina sy matahotra an’Andriamanitra ary mifady ny ratsy.” Dia namaly an’i Jehovah i Satana hoe: “Hatahotra an’Andriamanitra ve i Joba raha tsy misy tombontsoany ao? Tsy ianao ve no niaro azy sy ny tranony ary ny fananany rehetra? Notahinao ny asan’ny tanany, ka manenika ny tany ny biby fiompiny. Fa ahinjiro kosa ny tananao, azafady, ary kasiho ny fananany rehetra, dia jereo raha tsy hanozona anao eo imasonao izy.” Dia hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Eo am-pelatananao àry ny fananany rehetra, fa izy fotsiny no aza asiana.” Dia niala teo anatrehan’i Jehovah i Satana. (...) Dia hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Avy aiza ianao?” Dia namaly an’i Jehovah i Satana hoe: “Avy nivezivezy teny ambonin’ny tany sy nandehandeha teny aho.” Ary hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Efa nandinika an’i Joba mpanompoko ve ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin’ny tany? Lehilahy tsy manan-tsiny izy, sady marina sy matahotra an’Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Mbola tsy mivadika ihany izy, na dia mandrisika ahy hamongotra azy tsy amin’antony aza ianao.” Dia namaly an’i Jehovah i Satana hoe: “Hoditra solon’ny hoditra, ary izay rehetra ananan’ny olona dia homeny hiarovana ny ainy. Fa ahinjiro kosa ny tananao, azafady, ary kasiho hatramin’ny taolany sy ny nofony, dia jereo raha tsy hanozona anao eo imasonao izy.” Koa hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Eo am-pelatananao izy, fa ny ainy fotsiny no tandremo!”” (Joba 1:7-12; 2:2-6).
Ny lesoka amin'ny zanak'olombelona, ​​hoy i satana devoly, dia ny manompo an 'Andriamanitra, tsy noho ny fitiavany azy fa noho ny fitadiavany tena. Eo ambany fanerena, noho ny fahaverezan'ny fananany sy ny tahotra ny fahafatesana, mbola araka ny lazain'i satana devoly, ny olombelona dia tsy afaka mijanona mahatoky amin'Andriamanitra. Fa nasehon'i Joba fa mpandainga i satana: very ny fananany rehetra, namoy ny zanany 10 izy, ary saika matin'ny aretina izy (Joba 1 and 2). Ny namany sandoka telo dia nampijaly an'i Joba ara-tsaina, tamin'ny filazany fa ny fahoriany rehetra dia avy amin'ny fahotana miafina, ka noho izany dia nanasazy azy Andriamanitra noho ny helony sy ny faharatsiany. Na eo aza izany dia tsy nilavo lefona i Joba tsy fivadihana ary namaly azy ireo: "Sanatria ahy ny hilaza hoe marina ianareo! Tsy hanaiky hivadika mihitsy aho, mandra-pahatapitry ny aiko" (Joba 27:5).
Na izany aza, ny faharesen'ny devoly lehibe indrindra momba ny tsy fivadihan'ny olona, ​​dia ny fandresen'i Jesosy Kristy izay nankato an 'Andriamanitra, mandra-pahafatiny: "Ary tsy izany ihany, fa rehefa hitany fa nitovy tamin’ny olombelona izy, dia nanetry tena ka nanjary nankatò ary tonga hatramin’ny fahafatesana ny fankatoavany, eny, fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana" (Filipiana 2:8). Jesosy Kristy, tamin'ny tsy fivadihany, dia nanolotra fandresena ara-panahy tena sarobidy tamin'ny Rainy, izany no nahazoany valisoa: "Izany indrindra koa no antony nanandratan’Andriamanitra azy ho amin’ny toerana ambony kokoa sy ny nanomezany azy tamin-katsaram-panahy anarana ambony noho ny hafa rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalik’izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany ary any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra an-karihary fa i Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray” (Filipiana 2:9 -11).
Ao amin'ny fanoharana momba ny zanaka adala, Jesosy Kristy dia manome antsika fahatakarana tsara kokoa ny amin'ny fomba fiasan-dRainy raha toa ka apetraka am-bavany vetivety ny fahefan'Andriamanitra (Lio. 15: 11-24). Nangataka ny lovan'ny rainy ilay zazalahy ary nandao ny trano. Navelan'ilay raim-pianakaviana ny zanany olon-dehibe handray izany fanapahan-kevitra izany, nefa koa hitondra ny vokany. Toy izany koa, Adama dia nampiasa ny safidiny malalaka, nefa koa niaritra ny vokany. Izay mitondra antsika amin'ny fanontaniana manaraka momba ny fijalian'ny zanak'olombelona.
Ny antony mahatonga ny fijaliana
Ny fijaliana dia vokatry ny antony efatra lehibe
1 - Ny devoly no miteraka fijaliana (fa tsy foana) (Joba 1:7-12; 2:1-6). Araka an'i Jesosy Kristy dia i Satana no mpanapaka an'izao tontolo izao: "Tsaraina ankehitriny izao tontolo izao. Ary horoahina ankehitriny ilay mpitondra an’izao tontolo izao" (Jaona 12:31; 1 Jaona 5:19). Izany no antony tsy mahafaly ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny: "Fantatsika mantsy fa mbola miara-mitoloko sy miara-mijaly foana ny zavaboary rehetra mandraka ankehitriny" (Romanina 8:22).
2 - Ny fijaliana dia vokatry ny toetrantsika mpanota, izay mitarika antsika amin'ny fahanterana, aretina ary fahafatesana: "Koa tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. (...) Fa fahafatesana no tambin’ny ota" (Romana 5:12; 6:23).
3 - Ny fijaliana dia mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy (avy amintsika na an'ny olon-kafa): "Tsy ny tsara izay sitrako mantsy no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko fanao" (Deoteronomia 32:5; Romanina 7:19). Ny fijaliana dia tsy vokatry ny "lalàn'ny karma". Ity no azontsika vakiana ao amin'ny Jaona toko faha-9: "Ary raha nandalo Jesosy, dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianany nanontany azy hoe: "Nahita lehilahy jamba hatrany an-kibon-dreniny izy, raha iny nandalo iny. Ary nanontany azy ny mpianany hoe: “Raby ô, fa iza no nanota, io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny, no teraka jamba izy?” Hoy ny navalin’i Jesosy: “Tsy io lehilahy io no nanota, na ny ray aman-dreniny, fa mba hampisehoana ny asan’Andriamanitra eo aminy no anton’izany" (Jao. 9:1-3). Ny "asan'Andriamanitra", raha ny aminy, dia ho fahagagana hanasitranana ilay jamba.
4 - Ny fijaliana dia mety ho vokatry ny "fotoana sy fisehoan-javatra tsy ampoizina", izay mahatonga ny olona ho eo amin'ny toerana tsy izy amin'ny fotoana tsy mety: "Nandinika indray aho ka izao no hitako etỳ ambanin’ny masoandro: Tsy ny haingam-pandeha no mahazo fandresena, ary tsy ny mahery no mandresy, ary tsy ny hendry no manan-kanina, ary tsy ny mahira-tsaina no mahazo harena, ary tsy ny manam-pahalalana no mahazo sitraka, satria mety ho azon-tsampona izy rehetra amin’ny fotoana tsy ampoizina. Fa tsy fantatry ny olombelona ny fotoana ahafatesany. Toy ny trondro azon’ny harato mahafaty sy toy ny vorona azon’ny fandrika ny zanak’olombelona, izay voafandrika rehefa tonga tampoka aminy ny fotoana ahitan-doza" (Mpitoriteny 9:11,12).
Ity no nolazain'i Jesosy Kristy momba ny trangan-javatra mampalahelo roa izay niteraka fahafatesan'olona marobe: "Ary tamin’izay indrindra, dia nisy tamin’ireo olona teo nitantara tamin’i Jesosy ny nanjo ny Galilianina sasany. Nampifangaroin’i Pilato tamin’ny sorona nataon’ireo Galilianina ireo mantsy ny ran’izy ireo. Koa hoy i Jesosy: “Heverinareo ve fa mpanota kokoa noho ny Galilianina rehetra ireny, satria izany no nanjo azy? Tsy izany velively, hoy aho aminareo. Ho ringana toa azy koa anefa ianareo rehetra raha tsy mibebaka. Ary ireo olona valo ambin’ny folo maty nianjeran’ny tilikambo tao Siloama, heverinareo ve fa mpanota kokoa noho ny mponina rehetra ao Jerosalema ireny? Tsy izany velively, hoy aho aminareo. Ho ringana toa azy koa anefa ianareo rehetra raha tsy mibebaka”" (Lioka 13:1-5). Tsy nilaza na oviana na oviana i Jesosy Kristy fa ny olona iharan'ny lozam-pifamoivoizana na loza voajanahary dia nanota bebe kokoa noho ny hafa. Na aretina, lozam-pifamoivoizana na loza voajanahary dia tsy Andriamanitra no nahatonga.
Andriamanitra dia hanafoana izao fijaliana rehetra izao: "Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha” (Apokalypsy 21:3,4).
Lahatra sy safidy malalaka
Ny "Lahatra" dia tsy fampianarana Baiboly. Tsy "Voalahatra" hanao tsara na ratsy isika, fa araka ny "safidy malalaka" dia misafidy ny hanao ny tsara na ny ratsy (Deoteronomia 30:15). Ity fiheverana ny lahatra ity dia mifandray akaiky amin'ny hevitra ananan'ny olona maro momba ny fahafahan'Andriamanitra mahalala ny ho avy. Ho hitantsika ny fomba ampiasan'Andriamanitra ny fahaizany mamantatra ny ho avy. Ho hitantsika avy amin'ny Baiboly fa ampiasain'Andriamanitra mifantina na amin'ny tanjona manokana izy amin'ny alàlan'ny ohatra ara-Baiboly maro.
Mampiasa ny fahaizany Andriamanitra mahalala ny ho avy, amin'ny fomba malina sy mifantina
Fantatr'Andriamanitra ve fa hanota i Adama? Avy amin'ny teny manodidina ny Genesisy 2 sy 3, no. Tsy manome didy Andriamanitra, satria fantany mialoha fa tsy hotandremana izany. Mifanohitra amin'ny fitiavany izany ary tsy sarotra io didin'Andriamanitra io (1 Jaona 4:8; 5:3). Ireto misy ohatra ara-Baiboly roa izay mampiseho fa ampiasain'Andriamanitra mifantina ny fahaizany hahalala ny ho avy. Fa koa, ny fampiasany hatrany io fahaizana io amin'ny tanjona manokana.
Raiso ny ohatr'i Abrahama. Ao amin'ny Genesisy 22:1-14, Andriamanitra dia nangataka an'i Abrahama mba hanao sorona an'i Isaka zanany. Fantatr'Andriamanitra mialoha ve fa hankatò i Abrahama? Avy amin'ny teny manodidina ny Genesisy 22, no. Tamin'ny fotoana farany dia nilaza tamin'i Abrahama Andriamanitra mba tsy hanao izany: ”Ary hoy ilay anjely: “Aza maninjitra ny tananao hamely ny zaza, ary aza manao na inona na inona aminy mihitsy. Fa fantatro tokoa izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, satria nafoinao ho ahy ny zanakao, ilay lahitokanao”" (Genesisy 22:12). Voasoratra hoe "izao dia fantatro tokoa fa matahotra an'Andriamanitra ianao". Ilay andianteny "izao" dia mampiseho fa tsy fantatr'Andriamanitra raha hankatò izany hatramin'ny farany i Abrahama.
Ny ohatra faharoa dia ny fandravana an'i Sodoma sy Gomora. Ny nanirahan'Andriamanitra anjely roa hahita toe-javatra ratsy dia mampiseho indray fa tamin'ny voalohany dia tsy manana porofo rehetra izy hanapa-kevitra, ary tamin'ity tranga ity dia nampiasa ny fahaizany Izy hahafantatra amin'ny alàlan'ny anjely roa (Genesisy 18:20,21).
Raha mamaky ireo boky ara-paminaniana ara-Baiboly isan-karazany isika, dia ho hitantsika fa mbola mampiasa ny fahaizany hahalala ny ho avy Andriamanitra, amin'ny tanjona tena voafaritra tsara. Ohatra, raha bevohoka kambana i Rebecca, ny olana dia iza amin'ireo zaza roa no ho razamben'ilay firenena nofidin'Andriamanitra (Genesis 25:21-26). I Jehovah Andriamanitra dia nanao fandinihana génétique tsotra an'i Esao sy i Jakôba (na dia tsy ny génétika aza no mifehy tanteraka ny fitondran-tena ho avy), ary avy eo dia hitan'Andriamanitra ny karazan'olona ho tonga: "Nahita ahy ny masonao na dia mbola vao niforona aza aho. Ary voasoratra tao amin’ny bokinao ny faritra rehetra amin’izay ho vatako Sy ny andro hiforonan’ireny, Nefa mbola tsy nisy akory ireny, na iray aza" (Salamo 139:16). Nifototra tamin'io fahalalana io no nofidin'Andriamanitra (Romana 9:10-13; Asan'ny Apostoly 1:24-26 "Ianao, Jehovah ô, Izay mahalala ny fon'ny rehetra").
Miaro antsika ve Andriamanitra?
Alohan'ny hahatakarantsika ny fihevitr'Andriamanitra momba ny fiarovana antsika manokana dia zava-dehibe ny mandinika hevitra telo manan-danja ao amin'ny Baiboly (1 Korintiana 2:16):
1 - Nasehon'i Jesosy Kristy fa ny fiainana ankehitriny, izay miafara amin'ny fahafatesana, dia manana lanja vonjimaika ho an'ny olombelona rehetra (Jaona 11:11 (Ny fahafatesan'i Lazarosy dia voalaza ho "torimaso")). Ho fanampin'izany, nasehon'i Jesosy Kristy fa ny zava-dehibe dia ny fanantenana ny fiainana mandrakizay (Matio 10:39). Nasehon'ny apostoly Paoly fa ny "tena fiainana" dia miorina amin'ny fanantenana fiainana mandrakizay (1 Timoty 6:19).
Rehefa mamaky ny bokin'ny Asan'ny Apostoly isika dia mahita fa indraindray Andriamanitra dia tsy miaro ny mpanompony amin'ny fahafatesan'i, ohatra Jakoba sy Stefana (Asan’ny Apostoly 7:54-60; 12:2). Amin'ny tranga hafa dia nanapa-kevitra Andriamanitra ny hiaro ny mpanompony. Ohatra, taorian'ny fahafatesan'ny apôstôly James dia nanapa-kevitra Andriamanitra ny hiaro ny apostoly Petera (Asan’ny Apostoly 12:6-11). Amin'ny ankapobeny, amin'ny teny manodidina Baiboly, ny fiarovana ny mpanompon'Andriamanitra dia matetika mifandray amin'ny fikasany. Ohatra, ny fiarovana ny apôstôly Paul dia nanana tanjona ambony kokoa: ny hitory amin'ny mpanjaka (Asan’ny Apostoly 27:23,24; 9:15,16).
2 - Tokony hametraka ity fanontaniana momba ny fiarovan'Andriamanitra ity isika, ao anatin'ny tontolon'ny fanamby roa nataon'i Satana ary indrindra ny teny momba an'i Joba: "Tsy ianao ve no niaro azy sy ny tranony ary ny fananany rehetra? Notahinao ny asan’ny tanany, ka manenika ny tany ny biby fiompiny" (Joba 1:10). Mba hamaliana ny fanontaniana momba ny tsy fivadihana dia nanapa-kevitra Andriamanitra ny hanaisotra ny fiarovany amin'i Joba, fa amin'ny olombelona rehetra koa. Fotoana fohy talohan'ny nahafatesany, Jesosy Kristy, nanonona ny Salamo 22:1, dia naneho fa nesorin'Andriamanitra ny fiarovana rehetra taminy, izay nahatonga ny fahafatesany ho sorona (Jaona 3:16; Matio 27:46). Na izany aza, momba ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny, io tsy fananana fiarovana masina io dia tsy total, satria tahaka ny nandraran'Andriamanitra ny devoly tsy hamono an'i Joba, dia miharihary fa mitovy amin'ny olombelona rehetra izy io. (Ampitahao amin'ny Matio 24:22).
3 - Hitantsika etsy ambony fa ny fijaliana dia mety ho vokatry ny "fotoana sy fisehoan-javatra tsy ampoizina", izay mahatonga ny olona ho eo amin'ny toerana tsy izy amin'ny fotoana tsy mety (Mpitoriteny 9:11,12). Araka izany, amin'ny ankapobeny ny olona dia tsy voaro amin'ny vokatry ny safidy nataon'i Adama tany am-boalohany. Ny olona mihantitra, marary ary maty (Romana 5:12). Mety iharan'ny lozam-pifamoivoizana na loza voajanahary izy (Romana 8:20; ny bokin'ny Mpitoriteny dia misy famaritana amin'ny an-tsipiriany ny maha-zava-poana ny fiainana ankehitriny izay mitarika ho amin'ny fahafatesana: “Tena zava-poana!”, hoy ilay mpamory vahoaka, “tena zava-poana! Zava-poana ny zava-drehetra!” (Mpitoriteny 1:2)).
Ankoatr'izay, Andriamanitra tsy miaro ny olombelona amin'ny vokatry ny fanapahan-kevitr'izy ireo ratsy: "Aza manaiky ho voafitaka ianareo: Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin’ny olona ihany no hojinjainy. Izay mamafy ho an’ny nofony mantsy dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofony. Fa izay mamafy ho an’ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin’ny fanahy" (Galatianina 6:7,8). Raha navelan'Andriamanitra ho zava-poana ny zanak'olombelona nandritra ny fotoana elaela, dia mamela antsika hahatakatra izany fa nanaisotra ny fiarovany tamin'ny vokatry ny fahotantsika Izy. Mazava ho azy fa hihelina io toe-javatra mampidi-doza io ho an'ny olombelona rehetra (Romana 8:21). Rehefa voavaha ny fiampangana ny devoly dia hahazo ny fiarovana malala-tanan'Andriamanitra eto an-tany ny olombelona (Salamo 91:10-12).
Midika ve izany fa tsy arovantsika tsirairay Andriamanitra ankehitriny? Ny fiarovana omen'Andriamanitra antsika dia ny hoavintsika mandrakizay, raha ny amin'ny fanantenana fiainana mandrakizay, raha maharitra hatramin'ny farany isika (Matio 24:13; Jaona 5:28,29; Asan'ny Apôstôly 24:15; Apokalypsy 7:9 -17). Ho fanampin'izay, i Jesosy Kristy amin'ny filazalazany ny famantarana ny andro farany (Matio 24, 25, Marka 13 ary Lioka 21), ary ny bokin'ny Apôkalipsy (indrindra ny toko 6:1-8 sy 12:12), dia mampiseho fa hanana fahoriana lehibe ny zanak'olombelona hatramin'ny 1914, izay manasongadina fa tsy hiaro azy Andriamanitra mandritra ny fotoana kelikely. Na izany aza, Andriamanitra dia nanao izay hahafahantsika miaro tena samirery amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fitarihany feno hatsaram-panahy ao amin'ny Baiboly, ny Teniny. Amin'ny ankapobeny, ny fampiharana ireo fotopoto-pitsipika ao amin'ny Baiboly dia manampy amin'ny fisorohana ireo loza mety hitranga izay mety hanafohy ny fiainantsika amin'ny fomba (Ohabolana 3: 1,2). Hitanay etsy ambony fa tsy misy ny atao hoe lahatra. Noho izany, ny fampiharana ny fitsipiky ny Baiboly, ny fitarihan'Andriamanitra, dia ho toy ny mijery tsara ny ankavanana sy ny ankavia alohan'ny hiampitana ny arabe, mba hitehirizana ny aintsika (Ohabolana 27:12).
Ho fanampin'izay, ny apôstôly Petera dia nanitrikitrika ny filan'ny vavaka: "Efa manakaiky anefa ny faran’ny zava-drehetra. Aoka àry ianareo hisaina tsara, ary aoka ho mailo ka tsy hanao tsirambina ny vavaka" (1 Petera 4: 7). Ny vavaka sy ny fisaintsainana dia afaka miaro ny fandanjalanjantsika ara-panahy sy ara-tsaina (Filipiana 4:6,7; Genesisy 24:63). Ny sasany mino fa narovan'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainany. Tsy misy na inona na inona ao amin'ny Baiboly manakana antsika tsy hahita izany mety hitranga, mifanohitra amin'izany: "Dia hankasitraka an’izay hankasitrahako aho, sady hamindra fo amin’izay hamindrako fo" (Eksodosy 33:19). Tsy tokony hitsara isika hoe: "Fa iza moa ianao no hitsara ny mpiasa an-tranon’ny hafa? Eo anoloan’ny mpampiasa azy no ijoroany na ahalavoany. Eny tokoa, hajoro izy, fa afaka mampijoro azy i Jehovah" (Romanina 14:4).
Ny firahalahiana ary mifanampy
Alohan'ny hamaranana ny fijaliana dia tsy maintsy mifankatia sy mifanampy isika, mba hanamaivanana ny fijaliana eo amin'ny manodidina antsika: "Omeko didy vaovao ianareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Toy ny nitiavako anareo+ no tokony mba hifankatiavanareo koa. Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo”" (Jaona 13:34,35). I Jakôba mpianatra, rahalahin'i Jesosy Kristy iray reny taminy, dia nanoratra tsara fa io fitiavana io dia tsy maintsy aseho amin'ny asa mba hanampiana ny mpiara-belona amintsika izay ory (Jakoba 2: 15,16). Jesosy Kristy dia nilaza fa tsy maintsy manampy ireo izay tsy afaka mamerina izany amintsika isika (Lioka 14:13,14). Raha manao izany isika, amin'ny lafiny iray, dia "mampindrana" amin'i Jehovah isika ary haveriny amintsika izany... zato heny (Ohabolana 19:17).
Mahaliana ny mamaky izay lazain'i Jesosy Kristy ho fihetsika famindram-po izay hahafahantsika hanana fiainana mandrakizay: "Fa noana aho dia nomenareo hanina. Nangetaheta aho dia nomenareo hosotroina. Nivahiny aho dia nampiantranoinareo. Nitanjaka aho dia nampitafianareo. Narary aho dia nokarakarainareo. Tany am-ponja aho dia novangianareo" (Matio 25:31-46). Marihina fa amin'ireo hetsika rehetra ireo dia tsy misy fihetsika azo raisina ho "mpivavaka". Nahoana? Matetika i Jesoa Kristy dia namerina ity torohevitra ity: "Famindram-po no sitrako, fa tsy sorona" (Matio 9:13; 12: 7). Ny hevitry ny teny hoe "famindram-po" dia fiantrana amin'ny fihetsika (Ny dikany tery dia ny famelan-keloka). Ny mahita olona mila fanampiana, na fantatsika izy na tsia, ary raha afaka manao izany isika dia hanampy azy ireo (Ohabolana 3:27,28).
Ny sorona dia fanehoana asa ara-panahy mifandray mivantana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mazava ho azy fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no zava-dehibe indrindra. Na izany aza, Jesosy Kristy dia nanameloka ny sasany tamin'ireo niara-belona taminy izay nampiasa ny fiheverana ny "sorona" mba tsy hanampiana ireo ray aman-dreniny efa antitra (Matio 15:3-9). Mahaliana ny manamarika izay nolazain'i Jesosy Kristy momba ireo izay tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra: "Maro no hilaza amiko amin’izany andro izany hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô, moa ve izahay tsy efa naminany tamin’ny anaranao, sy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao, ary efa nanao fahagagana maro tamin’ny anaranao?’" (Matio 7:22). Raha mampitaha ny Matio 7:21-23 amin'ny 25:31-46 sy ny Jaona 13:34,35 isika dia mahatsapa fa ny "sorona" sy famindram-po dia singa roa tena lehibe (1 Jaona 3:17,18; Matio 5:7).
Hanasitrana ny olombelona Andriamanitra
Ho an'ny fanontanian'i Habakoka mpaminany (1:2-4), momba ny antony namelan'Andriamanitra ny fijaliana sy ny faharatsiana, dia izao no valiny: "Dia hoy i Jehovah tamiko: “Soraty ny fahitana, sady ataovy mazava tsara eo amin’ny takelaka fanoratana, mba hisosa tsara ny vakitenin’izay mamaky azy mafy. Fa mbola ho amin’ny fotoana voatondro vao ho tanteraka ilay fahitana, sady mihazakazaka mafy ho amin’ny farany ka tsy handainga. Ary na dia ela fiavy aza izany, dia andraso ihany, fa tsy maintsy ho tanteraka. Tsy ho tara izany"" (Habakoka 2:2,3). Ireto misy andinin-teny ao amin'ny Baiboly momba io "fahitana" ho avy tsy ho ela io:
"Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra taloha sy ny tany taloha, ary tsy nisy ranomasina intsony. Hitako koa ilay tanàna masina, dia i Jerosalema Vaovao, nidina avy any an-danitra avy any amin’Andriamanitra sady efa voaomana tahaka ny ampakarina mihaingo hihaona amin’ny vadiny. Tamin’izay aho dia nahare feo mafy avy teo amin’ny seza fiandrianana, nanao hoe: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha”” (Apokalipsy 21:1-4).
"Dia hiaraka tsindraindray ny zanak’ondry sy ny amboadia, hatoritory hiaraka amin’ny zanak’osy ny leopara, ary hiaraka daholo ny zanak’omby sy ny liona tanora ary ny biby nohatavezina, ka ankizilahikely no hitarika azy ireo. Hiara-misakafo ny ombivavy sy ny orsa, ary hiara-matoritory ny zanany. Na ny liona aza hihina-mololo toy ny omby. Hilalao eo amin’ny lavaky ny kôbrà ny zaza minono, ary ny zaza nisara-nono dia hametraka ny tanany eo amin’ny lavaky ny bibilava misy poizina. Tsy handratra na hanimba eran’ny tendrombohitro masina izy ireo, satria ho feno fahalalana an’i Jehovah ny tany, toy ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina" (Isaia 11:6-9).
"Amin’izany fotoana izany, dia hampahiratina ny mason’ny jamba, ary hatao mandre ny sofin’ny marenina. Amin’izany fotoana izany koa dia hahavita hianika tendrombohitra toy ny serfa ny malemy tongotra, ary hihoby ny lelan’ny moana. Fa hisy rano hiboiboika any an-tany efitra, ary hisy renirano any amin’ny lemaka karakaina. Hanjary ho toy ny kamory anirian’ny bararata ny tany ngazana, ary ho toy ny loharano ny tany karakaina. Hisy ahi-maitso sy bararata ary zozoro ny fonenan’ny alikadia, dia ny toerana fialany sasatra" (Isaia 35:5-7).
"Tsy hisy intsony ny zaza minono ho velona andro vitsivitsy monja, na ny lahiantitra tsy mahatapitra ny androny. Fa mbola tanora ihany izay maty na dia zato taona aza izy. Ary ny mpanota kosa na efa zato taona aza, dia hozonina. Hanao trano ny olona ka honina ao, ary hanao tanimboaloboka ka hihinana ny vokatra avy amin’izany. Tsy hanao trano hitoeran’olon-kafa izy, na hamboly zavatra hohanin’ny olon-kafa. Fa ho tahaka ny halavan’ny androm-piainan’ny hazo ny androm-piainan’ny oloko, ary hanaram-po amin’ny asan’ny tanany ny olom-boafidiko. Tsy ho very maina ny fisasarany, ary tsy hiteraka zaza hiharan’ny loza tampoka izy. Fa taranaka tahin’i Jehovah+ izy ireo sy ny taranany. Koa mbola tsy miantso izy ireo dia efa hamaly aho, ary mbola eo am-pitenenana izy dia efa henoko" (Isaia 65:20-24).
"Aoka ny nofony ho tsara noho ny an’ny tanora, Ary aoka hiverina aminy indray ny heriny tamin’ny fahatanorany" (Joba 33:25).
"Ary hanao fanasambe ho an’ny firenena rehetra i Jehovah Tompon’ny tafika eto amin’ity tendrombohitra ity, dia fanasambe misy hanim-pito loha, fanasambe misy divay efa naotrika ela, eny, fanasambe misy hanim-pito loha sady feno tsoka, sy divay efa naotrika ela ka notantavanina. Hofoanany eto amin’ity tendrombohitra ity ny rakotra izay mandrakotra ny vahoaka rehetra, sy ny lamba voatenona manarona ny firenena rehetra. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Hofafan’i Jehovah Tompo Fara Tampony koa ny ranomaso amin’ny tarehy rehetra, ary hesoriny ny fahafaham-barakan’ny olony any amin’ny tany rehetra, fa i Jehovah no efa niteny" (Isaia 25:6-8).
"Ho velona ny olonao izay efa maty. Hitsangana ny fatinay. Mifohaza ka mihobia ianareo izay mitoetra ao amin’ny vovoka! Fa ny andonao dia ho toy ny ando eny amin’ny fiandrilavenona, ary havelan’ny tany hateraka ny maty tsy mahefa na inona na inona" (Isaia 26:19).
"Ary maro amin’ireo matory ao amin’ny vovoky ny tany no hifoha, ka ny sasany hahazo fiainana tsy hanam-petra, fa ny sasany kosa hahazo latsa sy ho zava-maharikoriko mandritra ny fotoana tsy voafetra" (Daniela 12:2).
"Aza gaga amin’izany fa ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin’ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa hatsangana ho amin’ny fanamelohana" (Jaona 5:28,29).
"Ary manantena+ amin’Andriamanitra aho, araka izay antenain’izy ireo koa, fa hisy fitsanganan’ny marina sy ny tsy marina" (Asan’ny Apostoly 24:15).
Iza moa i satana devoly?
Jesosy Kristy dia namariparitra tsotra fotsiny ny devoly: "Mpamono olona hatrany am-piandohana izy, ary tsy nifikitra tamin’ny marina, satria tsy ao aminy ny marina. Rehefa mandainga izy, dia ny maha izy azy no avoakany, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga” (Jaona 8:44). Satana devoly dia tena zavaboary fanahy (Jereo ny fitantarana ao amin'ny Matio 4:1-11). Toy izany koa, ny demonia dia anjely izay tonga mpikomy koa izay nanara-dia an'i satana (Genesisy 6:1-3, raha ampitahaina amin'ny taratasin'i Joda andininy faha-6: "Ary ireo anjely izay tsy nitana ny toerany tany am-boalohany, fa nandao ny fonenana sahaza azy, dia notehirizin’Andriamanitra sy nofatorany mandrakizay ao amin’ny haizim-be, ho amin’ny fitsarana amin’ilay andro lehibe").
Andriamanitra dia nahary an'io anjely io tsy nisy ota ary tsy nisy faharatsiana tao am-pony. Ity anjely ity, tany am-piandohan'ny fiainany dia nanana "anarana tsara" (Mpitoriteny 7:1a). Na izany tsy nijanona ho mahatoky izy, namboly hambom-po tao am-pony ary rehefa nandeha ny fotoana dia tonga "devoly", izay midika hoe mpanendrikendrika sy mpanohitra; ny anarany tsara tarehy taloha, ny lazany tsara, dia nosoloina iray hafa miaraka amin'ny hevitry ny henatra mandrakizay. Ao amin'ny faminanian'i Ezekiela (toko 28), ny amin'ny mpanjaka reharehan'ny Tyro, mazava fa io dia miresaka ny hambom-pon'ny anjely lasa "satana": "Ry zanak’olona, manaova hira fisaonana ny mpanjakan’i Tyro, ka lazao aminy hoe: ‘Izao no nolazain’i Jehovah Tompo Fara Tampony:“‘“Ianao no modely nasiana tombo-kase. Feno fahendrena ianao, ary tonga lafatra ny hatsaran-tarehinao. Tao Edena, zaridainan’Andriamanitra, ianao. Rakotra vatosoa isan-karazany ianao, dia robia sy topaza ary jaspa, krizolita sy oniksa ary jady, safira sy torkoazy ary emeraoda. Tao anaty tranotranony volamena daholo ny vatosoa teny aminao. Efa natao vonona teo ireny, tamin’ny andro namoronana anao. Ianao ilay kerobima voahosotra ho mpiaro. Izaho no nanendry anao. Teny amin’ny tendrombohitra masin’Andriamanitra ianao, ary teny amin’ny vato mirehitra ianao no nandehandeha. Tsy nanan-tsiny ianao tamin’izay nataonao, nanomboka tamin’ny andro namoronana anao ka mandra-pahita tsy fahamarinana tao aminao"" (Ezekiela 28:12-15). Tamin'ny asany tsy ara-drariny tany Edena dia tonga "mpandainga" izy izay nahatonga ny fahafatesan'ny taranak'i Adama rehetra (Genesisy 3; Romana 5:12). Amin'izao fotoana izao dia i satana no mitondra an'izao tontolo izao: "Tsaraina ankehitriny izao tontolo izao. Ary horoahina+ ankehitriny ilay mpitondra an’izao tontolo izao" (Jaona 12:31; Efesiana 2:2; 1 Jaona 5:19).
Ho ringana tsy misy farany i satana: "Ary tsy ho ela ilay Andriamanitry ny fiadanana dia hanorotoro an’i Satana eo ambany tongotrareo" (Genesis 3:15; Romanina 16:20).